Tattoo quruxsan oo loogu talagalay dumarka, soo uruurin aad u dheer | Tattoo
Tattoo quruxsan oo loogu talagalay haweenka, soo uruurin aad u dheer
ka tattoos wanaagsan dumarka waxaa lagu kala saaraa inay yihiin kuwo aad iyo aad u caan ah. Sababta waa iska cadahay: waa kuwo caqli badan, aad u qurxan oo leh malaayiin fursado.
Qodobkaan waxaan ku siineynaa fikrado badan si aad adiguba u leedahay a tattoo ganaax, xarrago iyo mid gaar ah. Sii wad akhriska!
1 Astaamaha tattoos-ka wanaagsan
2 Tilmaamaha noocan ah tattoos
3 Fikradaha loogu talagalay tattooska ganaaxa ee haweenka
3.1 Erayada iyo ereyada
3.2 Dhirta ra
3.3 Fa Iyo fauna
3.4 Quluubta galore
3.5 Qalabka maalinlaha ah
3.6 Samee rabitaan
3.7 Booska dibedda
3.8 Iskutallaabyada iyo waxyaabaha kale ee diinta
3.9 Jaantusyada joomatari iyo mandalas
Astaamaha tattoos-ka wanaagsan
Tattoo-yada wanaagsan waxay leeyihiin astaamo dhowr ah oo lagu aqoonsan karo jaleecada hore. Ugu horreyntii (la yaab!) Qaabka loo yaqaan 'tattoos' waa mid aad u fiican. Marka labaad, waxay u muuqdaan kuwo aad u yar. Sidoo kale, ma isticmaalaan midab badan, ama haddii ay adeegsadaan, waa mid keliya. Sida iska cad, cabirkooda darteed, hooska ayaa laga reebay, marka lagu daro naqshadaha aadka u faahfaahsan. Dhanka kale, naqshadaha loo adeegsado walxaha fudud ama xarafyada waa kuwo aad u badan. Ugu dambeyntiina, cabirkoodu wuxuu kaloo ka dhigayaa kuwo kaamil ah inay ku xirtaan meelaha qarsoon. Mararka qaarkood dadku xitaa ma ogaadaan inaad xiran tahay iyaga!
Tilmaamaha noocan ah tattoos
Hadda oo aan aragnay astaamaha sawirka wanaagsan, Waxaan sii wadi doonaa inaan ku siino xoogaa talooyin ah si aad uga faa'iideysato noocan ah tattoos-yada:
Maaddaama tattoosyadani ay aad u yar yihiin, Dooro inaad ku dhejiso nashqaddaada meelaha lagu qaabeyn doono Qaab dabiici ah. Tusaale ahaan, curcurka, gacmaha, qoorta, jilibka, anqawga ... Laakiin taxaddar haddii aad rabto inaad ku sameyso farahaaga, maadaama meeshan khadku u muuqdo inuu libdho.
Ku sii wad mawduuca goobta: tixgeli tatooyada hore iyo kuwa mustaqbalka si aad u dhigto naqshadda halka ugu wanaagsan ee ay ku eegi doonto. Tusaale ahaan, haddii aad dooratid inaad ag dhigto taatiko aad u layaab leh, Tattoo-ga yar ayaa lumin doona xoojinta.
In kasta oo ay yihiin naqshado yaryar oo caqli badan, iskuday in taatikadaadu aysan ahayn kaar duurjoog ah oo boqolaal badan leh, laakiin ay gebi ahaanba tahay shaqsi. Ka fikir hiwaayadahaaga, dookhaaga, waxa ku xiisaynaya ...
Xitaa Naqshado qariib ah jaleecada hore, sida xirmo ama xaarka, waxay noqon kartaa wax aad u badan leh qaabkan. Ha xidhin albaabada!
Ugu dambeyntii, Sidoo kale waa waxtar in maskaxda lagu hayo in taatuuga ay leeyihiin qiimaha ugu yar ee caadiyan ka kooban khad, foosha ... Sidaa darteed, ha ka filin in yar ee tattoo, ka jaban waxay noqon doontaa.
Fikradaha loogu talagalay tattooska ganaaxa ee haweenka
Ma ogtahay inaad rabto tattoo yar oo ganaax ah laakiin aadan aqoon waxaas? Ha ka welwelin! Kadib waxaan ku siineynaa fikrado badan badan oo kala duwan.
Erayada iyo ereyada
Mid ka mid ah fikradaha ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhici kara marka la tixgelinayo naqshadaha nooca noocan oo kale ah ayaa ah dooro eray, weedh ama aayad. In kasta oo weedhaha dhiiri-gelinta iyo hagaajinta ay aad caan u yihiin, haddana adduunka waxaa ka buuxa ereyo qurux badan oo doonaya inay noqdaan taatoo, sida shaqada o raaxo. Ha ku sii nagaan meelaha muuqda!
Mid ka mid ah halyeeyada weyn ee tattoosku waa flora. Dhamaan flora: ka waran haddii geedo, ubaxyo, duur, fern, algae, geedo ... Waxa ugu fiican ayaa ah in wax walba ay leeyihiin macno la xiriira, waxa xun ayaa ah naqshadaha aan aragnay ad nauseam. Si aad uga faa'iideysato jilicsanaanta xariiqyadeeda, dooro dhirta duurjoogta ah sida daisiska, violets ...
Fa Iyo fauna
La mid ah flora ee mawduuca iyo caannimada, xayawaanku waa il heer sare ah oo dhiirrigelin u leh tattoo-ga wanaagsan. Markaad go'aansato xayawaanka aad rabto, maskaxda ku hay qaabka markaad go'aansaneysid nashqaddaada: dooro wakiillada fudud ee xayawaanka aad jeceshahay.
Waxaa laga yaabaa in mawduuca ugu looga faa'iideysto ee tattoosku uu yahay qalbiga. Hase yeeshe, waxaad had iyo jeer ku dhejin kartaa isbadal shaqsiyeed iyaga oo aadan kaliya ku dhegi karin habka caadiga ah. Tusaale ahaan, waad ka dhigi kartaa anatomical, waxaad ka dhigi kartaa electrocardiogram ...
Qalabka maalinlaha ah
Haddii waxa aad jeceshahay aad tahay farsamadaada, waxaad had iyo jeer ku dhiirrigelin kartaa shaqadaada tattoo-kaaga xiga. Tusaale ahaan, qalimaan, qalimaan, burush, wrenkes, pistons, spatulas ... Xaqiiqdii waxaad ka heli doontaa sheygaas aad ku xirmato gaar ahaan taas oo kuu sahlaysa nolol maalmeedkaaga.
Nooc kale oo khad ah: xiddigaha iyo kunka jid ee ay matalaan (Xiddigaha woqooyiga, David, qorraxda, xiddigaha ...). Waxay kuxirantahay waxaad rabto inaad gudbiso, waxaad dooran kartaa hal naqshad ama mid kale, dhammaantood waxay ku iftiimin doonaan iftiinkooda!
Anaguna kama fogaanayno xiddigaha, maxaa yeelay naqshadaha boosku sidoo kale way fiican yihiin. Gantaallo, dayax gacmeedyo, meerayaal, qorax, dayax, suumanka astaamo, majaajillo, galaxyo, nebulae, godad madow ... bannaanku waxaa ka buuxo yaabab kugu dhiirrigelin kara.
Iskutallaabyada iyo waxyaabaha kale ee diinta
Kuwa doonaya inay ku muujiyaan iimaankooda hab caqli iyo xarrago leh, tattoo fiican ayaa ku habboon. Ama xigasho gaaban ama qayb ka mid ah diintaada (sida iskutallaabtu markay tahay masiixiyadda) waxaad ku heli kartaa tattoo muujinaya iimaankaaga adigoon ka qaylin dusha sare.
Jaantusyada joomatari iyo mandalas
Tirooyinka joomatari waa fikrad kale oo aad uga faa'iideysan karto sawirkaaga xiga. Ama qaabab fudud (sida laba jibbaaranaha, saddexagalka, goobaabka) ama ka faa'iideysiga qaabka murugsan ee mandalas (oo weydiisanaya qaab xoogaa ka ballaadhan) waxay ku habboon yihiin tattoos fiican.
Waxaan rajeyneynaa inaan kugu dhiirrigelinay kooxdan fikradaha ah ee loogu talagalay tattoos wanaagsan haweenka. Noo sheeg, ma haysaa wax tattoos ah qaabkan? Waxaad noogu sheegi kartaa wax kasta oo aad rabto faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos loogu talagalay dumarka » Tattoo quruxsan oo loogu talagalay haweenka, soo uruurin aad u dheer
Tattoo PlayStation, loogu talagalay taageerayaasha dhabta ah!
Tattoo Libra, astaamaha ugu badan ee dheelitirka